Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka kala duwan » Sababaha aad ugu baahan tahay Mareegta Qofka Ganacsiga
Markaad ku jirto door shaqo oo dhaqameed badan sida ganacsade, waxaad u maleyn kartaa inaysan si fudud adiga kugu habboonayn inaad yeelato degel adiga kuu gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhammaan noocyada faa'iidooyinka dhismaha iyo abuurista goobta. Halkan, waxaan ku eegi doonaa dhowr ka mid ah si faahfaahsan heer sare ah.
Soo jiitaan raadinta gaadiidka
Dunida casriga ah, dad aad u badan ayaa alaab iyo adeegyo ka raadsada internetka. Haddii aanad lahayn shabakad, tani waa dariiqa suuq-geyneed ee aad ku dambayn doonto in aad lumiso. Ilaa inta goobtu ay u muuqato mid xirfad ku filan oo si cad u liis gareynaysa sababta aad u noqon doonto qofka ku habboon shaqada, waxaad aad ugu dhowdahay inaad soo jiidato mugga sare ee taraafik taas oo ah natiijada tooska ah ee tan.
Si cad U tax Adeegyadaada
Faa'iidada ugu weyn ee soo socota ee haysashada mareegta ganacsadaha waa xaqiiqda inaad leedahay madal aad si cad ugu taxdo dhammaan adeegyadaada. Mararka qaarkood, dadka aan dhammaan kuwa maskax-farsamo ahi waxay u baahan yihiin inay higgaadiyaan marka ay timaaddo ka shaqaynta sida saxda ah ee aad u siin karto iyaga. Halkii aad dhammaan macluumaadkan ku dhejin lahayd dukumeenti daabacan sida kaarka ganacsiga, degelku wuxuu ku siinayaa meel aad u badan oo aad ku muujiso aqoonsigaaga oo waxay faa'iido u leedahay in la cusbooneysiiyo marka loo baahdo marka aad ku darto ama ka saarto adeegyada xargahaaga.
Kalsooni sii macaamiisha
Waxaa jira shaki yar in website-ku uu noqon karo qalab qiimo leh oo lagu kordhinayo heerka kalsoonida ay dadku ku qabaan awooddaada inaad si fiican u qabato shaqada. Sidoo kale inaad awood u yeelatid inaad ku taxdo dhammaan adeegyadaada qaab cad sida aan horay uga wada hadalnay boostada blog, waxaad sidoo kale ku dari kartaa qaar ka mid ah markhaatiyada macaamiisha iyo daraasadaha kiis, kuwaas oo u adeegi kara kordhinta heerarka kalsoonida xitaa dheeraad ah. Haddii aad haysatid wax caddaynaya oo muujinaya inaad u qalanto, kuwan ayaa mudan in la soo bandhigo. Haddii aad hadda u qalanto, waad awoodaa baro wax badan oo ku saabsan shatiga HVAC halkan.
Iska ilaali in aad gadaal ka baxdo
Waxaa xaqiiqo ah in dad aad u badan ay noloshooda u bedelayaan internetka. Natiijo ahaan, shirkado badan ayaa la tacaalaya la soco. Xitaa haddii adeegyada aad bixiso ay ku jiraan meel aan khadka lahayn, isdhaafsiga halkan wali wuxuu ku dambayn karaa inuu noqdo mid muhiim ah. Waxaan ka hadalnay inta qof ee ku sameynaya raadinta internetka, laakiin sidoo kale waxaa jira mug weyn oo ah kuwa isticmaala warbaahinta bulshada oo si dabiici ah loo saameeyo habkan.
Dhammaan ganacsiyadu waxay u baahan yihiin shabakad adduunka casriga ah, tanina runtii waxaa ku jira shirkado ganacsi si ay u dhistaan ​​sumad, u helaan saldhig macmiil oo maxalli ah oo soo bandhigaan markhaatiyaal. Kuwani waa qaar ka mid ah sababaha ay tani u tahay kiiska, iyo saameynta isbeddelka ah ee ay ku yeelan karto ganacsigaaga waxay si fudud u soo afjari kartaa inay noqoto mid muhiim ah waxayna u taagan tahay tallaabo weyn.